Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-03 mpandimby ny Magazine > Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
Jesosy dia mampianatra fitsipika ambony momba ny fahamarinana izay mitaky toe-tsaina marina ao anatiny. Amin’ny teny manahiran-tsaina, dia mampitandrina antsika amin’ny fahatezerana, fanitsakitsaham-bady, fianianana, ary famaliana izy. Nilaza izy fa tsy maintsy ho tia ny fahavalontsika aza isika ( Matio 5 ). Nalaza tamin’ny fitarihana hentitra ny Fariseo, kanefa ny fahamarinantsika dia tokony ho tsara kokoa noho ny an’ny Fariseo (izay mety hahagaga tokoa raha hadinontsika izay nampanantenaina tany aloha tany amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra momba ny famindram-po). Ny tena rariny dia toetry ny fo. Ao amin’ny Filazantsaran’i Matio toko fahenina, dia hitantsika fa nanazava an’io raharaha io i Jesosy tamin’ny fanamelohana ny fivavahana ho toy ny fisehosehoana.
Fiantrana ao anaty miafina
« Tandremo ny fitiavam-bavakareo, fandrao hataonareo eo imason’ny olona izany mba ho hitan’ny olona; raha tsy izany dia tsy manana karama avy amin’ny Rainareo any an-danitra ianareo. Raha manao fiantrana ianao ankehitriny, dia aza avela hisy trompetra eo alohanao, tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny synagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa nahazo ny karamany izy » (and. 1-2).
Tamin’ny andron’i Jesosy dia nisy olona nanao fisehosehoana fivavahana. Nataony izay hahatonga ny olona hihaino ny asa tsara ataony. Noho izany dia nahazo fankasitrahana avy amin'ny sehatra maro izy ireo. Izay ihany no azon’izy ireo, hoy i Jesosy, satria fihetsika fotsiny no ataony. Tsy ny fanompoana an’Andriamanitra no niahy azy ireo, fa ny hijery tsara eo imason’ny besinimaro; toe-tsaina tsy hamaly soa an’Andriamanitra. Ny fitondran-tena ara-pivavahana koa dia hita amin’izao andro izao eny amin’ny polipitra, rehefa manao asa fanompoana, mitarika fampianarana Baiboly na lahatsoratra ao amin’ny gazetin’ny fiangonana. Fahano ny mahantra ary mitoria ny filazantsara. Ny ivelany dia toa serivisy matotra, saingy mety ho hafa be ny toe-tsaina. “Fa raha manao fiantrana ianao, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao havia izay ataon’ny tananao ankavanana, mba ho takona ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly soa anao” (and. 3-4).
Mazava ho azy fa tsy mahalala na inona na inona momba ny ataontsika ny “tànantsika”. Nampiasa fehezanteny iray i Jesosy izay milaza fa ny fiantrana dia tsy natao ho fisehosehoana, na ho tombontsoan’ny hafa, na ho fiderana tena. Manao izany ho an’Andriamanitra isika, fa tsy noho ny lazantsika. Tsy azo raisina ara-bakiteny ny hoe ny fiantrana dia azo atao ao anaty miafina. Nilaza i Jesosy teo aloha fa tokony ho hita ny asa tsara ataontsika mba hideran’ny olona an’Andriamanitra (Mat 5,16). Ny toe-tsaintsika no ifantohan’izany fa tsy ny fiantraikantsika ivelany. Tokony ho ny hanao asa tsara ho voninahitr’Andriamanitra no antony manosika antsika hanao asa tsara, fa tsy ho voninahitry ny tenantsika.
Ny vavaka miafina
Hoy koa i Jesosy momba ny vavaka: “Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay tia mijanona ao amin’ny synagoga sy eny an-joron-dalana ary mivavaka mba hahitan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa nahazo ny karamany izy. Fa raha mivavaka kosa ianao, dia midira ao amin’ny efi-tranonao, ka hidio ny varavarana, ka mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainareo, Izay mahita ny miafina, no hamaly soa anareo » (and. 5-6). Tsy manao didy vaovao hanoherana ny vavaka ampahibemaso i Jesosy. Na i Jesosy aza indraindray dia nivavaka ampahibemaso. Ny tiana holazaina dia tsy tokony hivavaka mba ho hita fotsiny isika, ary tsy tokony hiala amin’ny vavaka noho ny tahotra ny saim-bahoaka. Ny vavaka dia mivavaka amin'Andriamanitra ary tsy eo mba hanehoana ny tena tsara.
“Ary raha mivavaka ianareo, dia aza miteniteny foana tahaka ny jentilisa; satria mihevitra izy ireo fa ho henoina izy ireo raha miteny betsaka. Noho izany dia tsy tokony hanahaka azy ireo ianao. Fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo” (and 7-8). Fantatr’Andriamanitra izay ilaintsika, kanefa tokony hangataka aminy isika (Filipiana 4,6) ary mahareta (Lioka 18,1-8e). Ny fahombiazan’ny vavaka dia miankina amin’Andriamanitra fa tsy amintsika. Tsy voatery hahavita teny maromaro isika na hifikitra amin’ny fe-potoana faran’izay kely indrindra, na hivavaka manokana, na hifidy teny tsara. Nanome antsika vavaka santionany i Jesosy - ohatra momba ny fahatsorana. Mety ho mpitari-dalana izy io. Ny endrika hafa dia raisina ihany koa.
« Koa izany no tokony hivavahanareo toy izao: Rainay Izay any an-danitra! hohamasinina anie ny anaranao. ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra » (and. 9-10). Ity vavaka ity dia manomboka amin'ny fiderana tsotra - tsy misy saro-takarina, fa fehezanteny iray fotsiny amin'ny faniriana ny hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny handraisan'ny olona ny sitrapony. « Omeo anay anio izay hanina sahaza anay » (and 11). Ekentsika izao fa miankina amin’ny Raintsika Tsitoha ny fiainantsika. Na dia afaka mandeha any amin’ny fivarotana aza isika mba hividy mofo sy zavatra hafa, dia tokony hotadidintsika fa Andriamanitra no manao izany. Miankina aminy isan’andro isika. « Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy” (and. 12-13). Ankoatra ny famelomana dia mila fifandraisana amin’Andriamanitra koa isika - fifandraisana izay matetika atao tsirambina ary izany no mahatonga antsika matetika mila famelan-keloka. Io vavaka io koa dia mampahatsiahy antsika fa rehefa mangataka amin’Andriamanitra isika mba hamindra fo, dia tokony hamindra fo amin’ny hafa. Tsy olona goavam-be ara-panahy isika rehetra - mila ny fanampian'Andriamanitra mba hanoherana ny fakam-panahy.
Eto i Jesoa dia mamarana ny vavaka ary farany dia manondro indray ny andraikitsika hifamela heloka. Arakaraka ny hahatakarantsika tsara ny hatsaram-pon’Andriamanitra sy ny halehiben’ny fahadisoantsika no hahatakarantsika tsara fa mila famindram-po sy vonona hamela ny heloky ny hafa isika (and. 14-15). Toa famandrihan-toerana izao: "Rehefa vitanao izany ihany no hataoko". Ny olana lehibe iray dia ny hoe tsy dia mahay mamela heloka ny olona. Tsy misy tonga lafatra isika ary tsy misy mamela tanteraka. Moa ve i Jesosy mangataka antsika hanao zavatra izay tsy nataon’Andriamanitra? Mety ho voatery hamela ny heloky ny hafa tsy misy fepetra ve isika, nefa tsy misy fepetra ny famelany? Raha nataon’Andriamanitra niankina tamin’ny famelantsika ny famelan-keloka, ary nanao toy izany koa isika, dia tsy hamela ny heloky ny hafa raha tsy mamela heloka koa izy ireo. Hijoro eo amin'ny tsipika tsy misy fiafarana tsy mihetsika isika. Raha mifototra amin’ny famelan-keloka ny hafa ny famelan-keloka, dia miankina amin’izay ataontsika – ny asantsika ny famonjena antsika. Izany no mahatonga antsika hanana olana ara-teolojika sy azo ampiharina rehefa miresaka momba an’i Matio isika 6,14Raiso -15 ara-bakiteny. Amin’izao fotoana izao isika dia afaka manampy amin’ny fiheverana fa efa maty noho ny fahotantsika i Jesosy talohan’ny nahaterahantsika. Milaza ny Soratra Masina fa nohomboany teo amin’ny hazo fijaliana ny fahotantsika ary nampihavana izao tontolo izao taminy.
Amin’ny lafiny iray, ny Matio 6 dia mampianatra antsika fa toa misy fepetra ny famelantsika heloka. Etsy an-danin’izany, ny Soratra Masina dia mampianatra antsika fa efa voavela ny helotsika – izay ahitana ny ota tsy mamela heloka. Ahoana no hampifanarahana ireo hevitra roa ireo? Na diso fahazotoana ny andin-tenin'ny andaniny na ny ankilany. Afaka manampy tohan-kevitra fanampiny isika izao amin’ireo fiheverana fa matetika i Jesosy no nampiasa ny singa manitatra teo amin’ny resaka nataony. Raha mamitaka anao ny masonao, esory izy. Rehefa mivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranonao kely (fa Jesosy tsy nivavaka tao an-trano foana). Amin'ny fanomezana ho an'izay sahirana dia aza avela ho fantatry ny tananao havia izay ataon'ny havanana. Aza manohitra olon-dratsy (fa i Paoly). Aza miteny mihoatra ny eny na tsia (fa i Paoly no nanao izany). Tsy tokony hiantso na iza na iza ho ray ianao - ary isika rehetra dia manao izany.
Hitantsika avy amin’izany ny ao amin’ny Matio 6,14-15 Nisy ohatra iray hafa momba ny fihoaram-pefy. Tsy midika akory izany hoe tsy azo atao tsinontsinona izany – tian’i Jesosy hasongadina ny maha-zava-dehibe ny famelana ny heloky ny hafa. Raha tiantsika ny hamelan’Andriamanitra antsika, dia tokony hamela ny hafa koa isika. Raha tiantsika ny hiaina ao amin’ny fanjakana iray izay nahazoantsika famelan-keloka, dia tsy maintsy miaina izany koa isika. Araka ny faniriantsika ho tian’Andriamanitra, dia tokony ho tia ny mpiara-belona amintsika koa isika. Raha tsy mahomby isika dia tsy hiova ny toetran’Andriamanitra ho tia. Mijanòna ho marina, raha te hotiavina isika dia tokony ho toy izany koa. Na dia toa miankina amin’ny fepetra takiana mialoha aza izany rehetra izany, dia ny hamporisika antsika hitia sy hamela heloka no tanjon’ny zavatra voalaza. Namolavola azy io toy ny toromarika toy izao i Paoly: “Mifandefera, ka mifamelà heloka, raha misy mitaraina amin’ny namany; tahaka ny namelan’ny Tompo ny helokareo no mba hamelanareo heloka kosa!” (Kolosianina 3,13). Ohatra iray ity; tsy fepetra izany.
Amin’ny vavaky ny Tompo dia mangataka ny hanina isan’andro isika, na dia efa manana izany ao an-trano aza (amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra). Toy izany koa, mangataka famelan-keloka isika na dia efa nahazo izany aza. Izany dia fanekena fa nanao zavatra tsy nety isika ary misy fiantraikany amin’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra izany, nefa miaraka amin’ny fahatokiana fa vonona hamela heloka Izy. Anisan'ny dikan'ny hoe manantena ny famonjena ho fanomezana fa tsy zavatra mendrika antsika amin'ny zava-bitantsika.
Fifadian-kanina amin'ny miafina
Hoy i Jesosy momba ny fitondran-tena ara-pivavahana hafa: “Raha mifady hanina ianareo, dia aza mba ho tezitra tahaka ny mpihatsaravelatsihy; fa mampihatsaravelatsihy ny tavany hiseho amin'ny olona amin'ny fifadian-kanina izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa nahazo ny karamany izy. Fa raha mifady hanina ianao, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao, mba tsy hiseho amin’ny olona amin’ny fifadian-kanina ianao, fa amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainareo, Izay mahita ny miafina, no hamaly soa anareo” (and. 16-18). Rehefa mifady hanina isika, dia misasa sy mibango, toy ny mahazatra, satria manatona an’Andriamanitra isika fa tsy manaitra ny olona. Ny toe-tsaina indray no tsindriana; tsy hoe ho voamariky ny fifadian-kanina izany. Raha misy manontany antsika raha mifady hanina isika dia afaka mamaly marina - fa tsy tokony hanantena hanontaniana mihitsy. Ny tanjontsika dia tsy ny hisarika ny saina, fa ny fitadiavana ny akaiky an’Andriamanitra.
Jesosy dia manondro ny lohahevitra iray ihany amin'ireo lohahevitra telo rehetra. Na manome fiantrana na mivavaka na fifadian-kanina isika dia vita "amin'ny mangingina". Tsy mikatsaka izay hanaitra ny olona izahay, na tsy manafina azy ireo. Isika dia manompo an'Andriamanitra ary manaja Azy irery. Hamaly soa antsika Izy. Ny valiny dia mety ho azo atao mangingina ihany koa. Tena misy izany ary mitranga araka ny hatsaram-panahiny.
Aoka isika hifantoka amin’ny fampifaliana an’Andriamanitra. Aoka isika hanao ny sitrapony sy hanome lanja ny valisoa azony mihoatra noho ny valisoa vetivety eto amin’ity tontolo ity. Ny fiderana ampahibemaso dia endrika valisoa vetivety. Ny fiovaovan'ny zavatra ara-batana no resahin'i Jesosy eto. “Aza manangona harena ho anareo etỳ an-tany, izay misy kalalao sy harafesina mihinana azy, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy mihinana kalalao na harafesina, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra » (and 19-20). Tsy maharitra ny harenan’izao tontolo izao. Manoro hevitra antsika i Jesoa mba hikatsaka paikady fampiasam-bola tsara kokoa - hikatsaka ny soatoavina maharitra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiantrana mangina, vavaka tsy mibaribary, ary fifadian-kanina miafina.
Raha raisina ara-bakiteny loatra i Jesosy, dia mety hihevitra ny olona fa nanao didy izy mba tsy hanangom-bola ho an'ny taona fisotroan-dronono. Fa raha ny marina dia momba ny fontsika izany - izay heverintsika ho sarobidy. Tokony hanome lanja ny valisoa avy any an-danitra mihoatra noho ny tahirim-bolantsika isika. “Fa izay itoeran’ny harenareo, dia any koa ny fonareo” (and 21). Rehefa hitantsika ireo zava-tsarobidy izay heverin’Andriamanitra ho sarobidy, dia hitarika ny fitondran-tenantsika araka ny tokony ho izy koa ny fontsika.
«Ny maso no fahazavan’ny tena. Rehefa mafy ny masonao, dia hazava ny tenanao manontolo. Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben’ny haizina! (and. 22-23). Toa nampiasa ohabolana iray tamin’ny androny i Jesosy ary nampihatra izany tamin’ny fitsiriritana vola. Rehefa mijery ny zavatra tsara isika, dia hahita fahafahana hanao soa sy malala-tanana. Na izany aza, rehefa tia tena sy mialona isika dia miditra ao anatin’ny haizina ara-pitondrantena – simbain’ny fiankinan-dohantsika. Inona no tadiavintsika eo amin'ny fiainantsika - ny mandray sa ny manome? Namboarina hanompo antsika ve ny kaontim-bolantsika sa mamela antsika hanompo ny hafa? Ny tanjontsika dia mitarika antsika amin'ny tsara na manimba antsika. Raha simba ny ao anatiny, raha mitady ny valisoa eto amin’ity tontolo ity fotsiny isika, dia tena simba tokoa. Inona no mandrisika antsika Ny vola ve sa Andriamanitra? «Tsy misy mahay manompo tompo roa: na ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hifikirany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna ianareo » (and 24). Tsy afaka manompo an’Andriamanitra sy ny hevitry ny besinimaro amin’ny fotoana iray isika. Tokony hanompo an’Andriamanitra irery ihany isika ary tsy misy fifaninanana.
Ahoana no ahafahan'ny olona "manompo" mamona? Amin'ny finoana ny fahitana fa hitondra ny vintana ny vola, dia hahatonga azy ho toa tena matanjaka ary afaka mampiditra valiny lehibe izy. Ireo fanombanana ireo dia mifanaraka tsara amin'Andriamanitra. Izy no mahasambatra antsika, izy no tena loharanom-piarovana sy fiainana; Izy no hery afaka manampy antsika indrindra. Tokony hanome lanja sy hanome voninahitra azy bebe kokoa noho ny zavatra rehetra isika satria izy no voalohany.
Ny tena filaminana
« Koa izany no ilazako aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ... izay hohaninareo sy hosotroinareo; ... izay hotafinao. Mitady izany rehetra izany ny jentilisa. Fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany » (and. 25-32). Ray tsara Andriamanitra ary Izy no hikarakara antsika rehefa manana ny toerana ambony indrindra eo amin’ny fiainantsika Izy. Tsy mila manahy momba ny hevitry ny olona isika na manahy momba ny vola na ny entana. “Katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia ho latsaka aminareo izany rehetra izany” (and 33) Ho ela velona isika, ho voky hohanina, ho ampy ho an’ny tenantsika raha tia an’Andriamanitra isika.
Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (3)